Semalt: Inona no atao hoe spam?
Igor Gamanenko, Semalt Mpitantana Success Manager, dia miteny fa misy vondrona mpihoko Rosiana manokana izay namolavola spam-refereneran'ny botnet. Ity fanafihana spam ity dia midika fa handefa mailaka tolotra mailaka entina hividianana vokatra tahaka ny Viagra na fanafody fampitomboana ny lahy. Ity fanafihana tamin'ny spam ity dia nahavita nanarona ny ampahatelon'ireo mailaka amin'ny spam manerantany. Ireo mpanafika ao ambadik'ity tetikasa ity, dia mametraka ny lalàna sy lalàna tsy ara-dalàna mba hahazoana vola. Voalohany indrindra, ireo dia antso mampihetsi-po izay mitaky ny olona hividy scam sites. Faharoa, nandefa fanafody tsy miankina avy any Inde na Rosia ireo mpitsoa-ponenana ireo ho an'ireo niharan-doza tsy nahy. Mba hanapaka tantara fohy lava, alefa mailaka ho an'ny olona an-tapitrisany, manantena ny hanao an-jatony raha tsy an'arivony fivarotana.
Raha nanao ireny heloka ireny ireo mpanao heloka bevava ireo, dia nihazakazaka malware sy virosy teo amin'ny solosainy. Ny milina hacked dia tsy niasa araka ny tokony ho izy ary nanaraka ny didin'ilay mpanafika ihany. Raha ny filazàna fa ireo niharam-boina dia Amerikana indrindra. Ny baiko voalohany amin'ny mpanafika dia ny hanangona adiresy mailaka ary hanao lisitry ny mpandray anjara mavitrika. Ny tetika manontolo dia novonoina tamin'ny fomba fanafihana botnet..Taorian'ny fanadihadiana marobe dia nisy olona sasany tao ambadik'ity fanafihana ity no nentina am-ponja. Na izany aza, raha ny hevitro, tsy nijanona ny Viagra-spam, ary afaka manantena ny fanafihana hacker kokoa isika amin'ny ho avy.
Ahoana ny asan'ny spam
Araka ny fanadihadiana avy amin'ny Oniversiten'i Kalifornia, maro ireo banky sy mpamatsy no manamaivana ny fampielezana ny sasany amin'ireto mailaka mailaka spam. Midika izany fa ny sasany amin'ireo antoko ao amin'ny tetikasa pharma ao anaty aterineto dia liana amin'ny fitondrana mivarotra ny vokatra fanafody.
Nandritra ny fianarana, ireo mpikaroka sy mpanao gazety dia nanatsoaka hevitra fa ny mpampiasa dia mampiasa ireto fomba manaraka ireto hanatanterahana ny drafitr'izy ireo:
Tahaka ireo fomba amam-panao dizitaly mahazatra, ireo mpanafika dia mampiasa ny dokam-barotra ho fomba iray hampiroboroboana ny vokatra amin'ny aterineto. Amin'ny ankapobeny, ireo mpanafika ireo dia nampiasa mailaka ho toy ny fomba tiany hahatongavana amin'ireo mpividy mety amin'ny alàlan'ny fanimbana bilaogy, media sosialy, fanatsarana ny fikarohana, sns. Ireo manam-pahaizana dia nanamarika fa afaka mandroso be ny mpampiasa tranonkala amin'ny alàlan'ny fanarahamaso ny adiresy IP ary manampy ireo mpiserasera hiala amin'ny fanafihana . Mampalahelo anefa fa ny ankamaroan'ny mailaka maneran-tany dia mbola tsy misy spam.
2. Tsindrio ny fanohanana
Ny mpampiasa dia mampiasa io fomba io hanodinana ireo mpampiasa ao amin'ny tranonkalany amin'ny fametrahana rohy maloto na fisorohana amin'ny mailaka. Mifandray amin'ny fivarotana zava-mahadomelina an-tserasera izy ireo, izay manaiky sy mandamina ny baiko mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, ity ampahany ity dia novonoin'ny sampan-draharaha tsy miankina izay tsy misy ifandraisany amin'ireo mpamaky spam sy ny botnet masters. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ireo mpanafika dia miasa ho an'ireo orinasan'ireny tranonkala ireny, izay ahazoan'izy ireo 30 ka hatramin'ny 50% amin'ny totalin'ny varotra Source .